Yurub oo laga yaabo in eey Liibiya ka soo qaado kummanaan kun oo muhaajirin ah | Somaliska
Yurub oo laga yaabo in eey Liibiya ka soo qaado kummanaan kun oo muhaajirin ah
Kumaanan kun oo qaxootiga ku ah xeebaha dalkaasi Liibiya, ayaa haatan waxaa suuragal ah in Midowga Yurub uu soo qaado islamarkaasina ay saami ahaan u qeybsadaan. Sidaas waxaa sheegay wasiirka arrimaha gudaha dalkaasi Talyaaniga ee Marco Minniti oo u waramayey wargeyska La Repubblica.
Qaxooti kor u dhaafay 400.000 (afar boqol oo kun) ayaa ku sugan guud ahaan dalkaasi Liibiya 36.000 (Soddon iyo lix kun) oo ka mid ahina ay yihiin carruur sida ay sheegtay Qarammadda Midoobay. Dadkan oo badankooda ka yimid Bariga dhexe, Afrika ayaa dalkaasi Liibiya waxaa ka dilaacay kooxo shufto ah oo ka ganacsada qaxootigaasi kuwaas oo xitaa qaarkood baddaha si ula kac ah loogu daadiyey.
Hey’adda caalamiga ah ee qaxootiga adduunka oo marka la soo gaabiyo loo yaqaan IOM, ayaa dooneeysa in soddon kun oo muhaajiriin ku xayiran dalkaasi loona heeyso addoonsi ay dib ugu celineeyso dalalkoodi. Hey’adda ayaa sidoo kale sheegtay in shan iyo tobbban kun oo qaxooti ah suuragal ay noqotay in dalalkoodii dib loogu celiyo.
Arrimahan ayaa imanaya xilli dhawaan telefeeyshinka CNN uu sii daayey barnaamij ka hadlaya qaxootiga halkaasi ku sugan sida suuqyada dalkaasi addoonsi ahaan loogu kala iibsado. Muuqaladan ayaa caalamka carro weyn ka muujiyey kana guuxay. Liibiya waa dal ay soomaali badan oo dhibbaato ay ugu geeystaan tuugadda iyo manaxayaalka dalkaasi ee la baxday Magafe.
Soomaalida Sweden oo cambaareysay baarlamaanka [video]